कस्ता व्यक्ति जीवनमा चाँडै चम्किन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन « Harekpal
कस्ता व्यक्ति जीवनमा चाँडै चम्किन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वदमौ श्रुतं च ।
पराक्रमश्चबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ।। –संस्कृतसुभाषितम्
असल व्यक्तिका आठ गुणः बुद्धि, सुन्दर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान र कृतज्ञता हुन् । यी गुण हुने व्यक्ति जीवनमा चाँडै चम्किन्छन् ।
असल व्यक्तिका आठबटा गुण हुन्छन् भनी नीति शास्त्रमा बताइएको छ । सर्वप्रथम असल व्यक्ति हुन बुद्धि अर्थात् विवेकको आवश्यकता पर्दछ । के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुरा छट्याउने काम बुद्धिले गर्दछ । अतः असल हुनका निम्ति बुद्धि अर्थात् विवकलाई पहिलो शर्त मानिएको छ । यसैगरी अर्को गुण भनेको सत् चरित्र हो । चरित्रमा दाग लागेको व्यक्ति असल हुन सक्दैन । यसैगरी असल हुनका निम्ति अर्को पक्ष भनेको आत्म नियन्त्रण हो । साथै आवेगलाई धान्न सक्ने सहनशीलता पनि असल व्यक्तिमा आवश्यक हुने गर्दछ ।
शास्त्र अध्ययन नगरेको व्यक्ति असल हुन सक्दैन । सच्चा व्यक्ति बन्नका निम्ति विभन्नशास्त्रको अध्ययन आवश्यक पर्दछ । यसैगरी साहस पनि असल व्यक्तिको अर्को चिनारी हो । निरुत्साही व्यक्तिलाई असलको कोटिमा राखिएको छैन । हरेक कार्य गर्ने आँट हुनु पर्छ भन्ने नीतिकारको मत रहेको छ ।
असल व्यक्ति बन्न बोली पनि मीठो हुनु आवश्यक मानिएको छ । मृदु भाषी व्यक्तिलाई नै असलको संज्ञा प्रदान गरिएको छ । दान पनि असल व्यक्तिको अर्को गुण हो । जसले नित्य दान गर्छ त्यो व्यक्ति नै असली हो भनिएको छ । यसैगरी हरेक कार्यमा कृतज्ञ भई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पनि सक्नु पर्दछ । कृतज्ञ हुनु पनि असल व्यक्ति हुने लक्षण हो । अतः असल व्यक्तिका निम्ति यी आठ कुरा हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्ता वयक्ति जीवनमा चाँडै चम्किन्छन् भन्ने नीति वचन मननीछ छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् –